Desire Series ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းတော့မယ့် HTC
20 Feb 2018 . 4:06 PM
HTC ရဲ့ Desire Series စမတ်ဖုန်းတွေကို မှတ်မိကြသေးရဲ့လား?
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကျော်၊ ၃ နှစ်ဝန်းကျင်လောက်က HTC ဟာ သူရဲ့ Flagship Series ဖုန်းတွေကို One Series လို့နာမည်မပေးခင်၊ HTC U Series စမတ်ဖုန်းတွေမထုတ်လုပ်ခင်တုန်းက HTC Desire နာမည်နဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Mid Range စမတ်ဖုန်းတွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ HTC ကနေ Desire Series Mid Range ဖုန်းကို ပြန်ပြီးထုတ်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ Mid Range စမတ်ဖုန်းမဟုတ်ပဲ Low-End Entry စမတ်ဖုန်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ HTC Desire စမတ်ဖုန်းဟာ Desire 12 လို့ နာမည်ပေးထားပြီးတော့ Mediatek Processor နဲ့အတူ RAM 3GB နဲ့ ROM 32GB ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Storage အနေနဲ့ 32GB ပါဝင်တယ်ဆိုပေမယ့် ထပ်တိုးချင်တယ်ဆိုရင် MicroSD Card ကနေ 2TB MicroSD Card အထိ ထည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခု Desire 12 စမတ်ဖုန်းဟာ လက်ရှိစမတ်ဖုန်းတွေမှာ ခေတ်စားလာတဲ့ 18:9 Ratio Display ကို HD+ Resolution နဲ့ အသုံးပြုလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Camera ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ 12MP Back Camera နဲ့အတူ Front Camera ကိုတော့ 5MP Selfie Camera ကိုပဲ အသုံးပြုထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Battery ကလည်း 2,730 mAh Battery ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Dual SIM ကိုလည်း Support ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Ref : GSMAreana
HTC ရဲ့ Desire Series စမတျဖုနျးတှကေို မှတျမိကွသေးရဲ့လား?
လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈကြျော၊ ၃ နှဈဝနျးကငျြလောကျက HTC ဟာ သူရဲ့ Flagship Series ဖုနျးတှကေို One Series လို့နာမညျမပေးခငျ၊ HTC U Series စမတျဖုနျးတှမေထုတျလုပျခငျတုနျးက HTC Desire နာမညျနဲ့ အရညျအသှေးကောငျးတဲ့ Mid Range စမတျဖုနျးတှကေိုထုတျလုပျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာတော့ HTC ကနေ Desire Series Mid Range ဖုနျးကို ပွနျပွီးထုတျလုပျတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီတဈခါမှာတော့ Mid Range စမတျဖုနျးမဟုတျပဲ Low-End Entry စမတျဖုနျးဖွဈလာမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီတဈခါ HTC Desire စမတျဖုနျးဟာ Desire 12 လို့ နာမညျပေးထားပွီးတော့ Mediatek Processor နဲ့အတူ RAM 3GB နဲ့ ROM 32GB ပါဝငျမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ Storage အနနေဲ့ 32GB ပါဝငျတယျဆိုပမေယျ့ ထပျတိုးခငျြတယျဆိုရငျ MicroSD Card ကနေ 2TB MicroSD Card အထိ ထညျ့သှငျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခု Desire 12 စမတျဖုနျးဟာ လကျရှိစမတျဖုနျးတှမှော ခတျေစားလာတဲ့ 18:9 Ratio Display ကို HD+ Resolution နဲ့ အသုံးပွုလာမှာဖွဈပါတယျ။ Camera ပိုငျးအနနေဲ့ကတော့ 12MP Back Camera နဲ့အတူ Front Camera ကိုတော့ 5MP Selfie Camera ကိုပဲ အသုံးပွုထားမှာဖွဈပါတယျ။ Battery ကလညျး 2,730 mAh Battery ပါဝငျမှာဖွဈပွီး Dual SIM ကိုလညျး Support ပွုလုပျမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။